Welthungerhilfe: Mala Adeemsa Keenyaa
Beelli guutuu addunyaa keessatti rakkoo isaa rakkoolee hundaa oliiti. Haa ta’uu malee furmaata itti gochuun ni danda’ama. Mullatni Velt Hunger Hilfe addunyaa irratti namni hundinuu kabajaa horatee, haqa qabaatee, beelaa fi hiyyuma irraa bilisa ta’ee jireenya ofiif murteeffateen jiraachuu danda’a jedha.
Galmi tarsiimoo Welthungerhilfe bakka nuti hojjennu hundatti bara 2030 (ALG tti) beela balleessuu dha. Kunis Galma Misooma Itti Fufiinsa Qabu 2ffaa kan Biyyoota Gamtoomanii irratti hundaa’a. Qooda fudhattoota hawaasaa wajjin hojjechuudhaan biyyoota keessatti hojjennu hunda keessaa beela balleessuu barbaadna. Hojiin keenya haala ammaa fi fuulduree dhalootaa fooyyessuu irratti hundaa’a. Kana yeroo raawwannu naannoo fayyaa qabuu fi hawaasa haqa qabeessa akka horatan gochuuf isaan gargaarra.
Malawwan beela balleessuuf hojiirra oolfaman
Nuti beela addunyaa keessaa balleessuu fi wabii nyaataa itti fufiinsa qabu uumuuf qabsoofna. Qabsoon kun qonna dirree murtaa’aa fi dhiheessa bishaan qulqulluu jajjabeessuu fi fayyaa, barnootaa fi misooma dinagdee fooyyessuudhaan dhiheessa anniisaa faalama nannoo irraa bilisa ta’e cimsuu dabalata.
Wabii Nyaataa Walitti Hidhata Qabu
Wanti nuti ittiin beekamnu waabii nyaataa fi nutriishinii mirkaneessuuf LANN+leenjiin maatilee baadiyyaa aangomsaa dha. Nuti adeemsa murtilee ciccimoo dabarsuu keessatti dubartoota hirmaachisuu irratti xiyyeffannoo olaanaa qabna.
Dhimmi kun kan dabalatu qonna dirree-murtaa’eeti. Kunis qonnaan bultootni lafa qonnaa xixiqqa qaban akka midhaan oomisha baayyyee fi nutriishinii gahaa qabu akka qotanitti gargaaruu dha. Midhaan nutriishinii gahaa qabu qabeenya uumamaa qusachuudhaan beelaa fi hiyyuma hambisuuf fayyadu.
Mala Adeemsaa Gaba irratti Hundaa’e
Welthungerhilfen gama mala gabaa irratti hundaa’eetiinis hawaasa ni aangessa. Hawaasa aangessuun akka ummatni qonnaa isaanii irraa oomishaargachuun jireenya itti fufu taasisa. Akkasumas Piroojektii Wabii Nyaataa Waalta’aa hundeessuuf ni gargaarra. Kana kan goonu maatileen baadiyyaa sababa gaaffii dhiheessa oomisha qonnaa addunyaa irraa dhihaatuu fi sababa daldalaatiin akak mirgi isaanii hin cabnetti mirkaneessuu dha.
Piroojektiin “Welthungerhilfe” biyyoota walitti bu’insaa fi jijjiirama qilleensaa isa badii qabutiin hubaman akka dandamatanitti isaan cimsa. Rakkoolee fuulduratti uumamuu danda’aniif hawaasni akka caalaatti of qopheessu gochuuf hojiileen gargaarsa balaa kanneen yeroo gabaabaa sagantaalee misoomaa yeroo dheeraatiin walitti hidhamaniiru.
Dhaabbilee Hawaasa Sivilii Cimsuu
Adeemsi mala dadammaqsuu mirgoota irratti hundaa’an kan Welthungerhilfe dhaabilee hawaasa sivilii sadarkaa gadiitti ni cimsa. Hojii cimsuu kana irratti ummata hacuucame (gara moggaatti dhiibame) mirga qabaachuu isaanii (warra gargaarsa fudhatu osoo hin taane) mirkaneessuudhaan raawwatama. Kana malees akkaataa isaan mirga namni nyaata argachuu fi lafa, bishaanii sayii midhaanii argachuu qabu akka cimsanii gaafatan taasisu kennuufiidhaan raawwatama.
Hojii Dadammaqsa Siyaasaa
Dhaabbilee Mitimootummaa warra gartulee hawaasa sivilii, aanga’oota siyaasaa fi investeroota gidduutti sadarkaa walqixxummaa irratti hundaa’een marii jajjabeessanii jijjiirama siyaasaa fiduuf hojjetanis ni gargaarra.
Of danda’uu irratti cimsanii hojjechuu
Kaayyoon keenya jireenya ummataa yeroo dheeraa keessatti fooyyessuu dha. Kanaafuu akka bu’uura piriinsipila ‘of gargaaruuf gagaari’ jedhuutti hojjenna. Sagantaaleen keenya kan qopheeffaman ummatni akka jireenya isaanii irratti to’annoo qabaatanii fi akka isaan dhalli namaa nyaata argachuuf mirga qabu dhugoomfatutti aangessuudhaafi.
Malli adeemsa Welthungerhilfe hojiilee piroojektii murtaa’e tokkoo fi hojii dadammaqsa siyaasaa qofa irratti kan hundaa’e osoo hin taane bu’aalee safaramanii fi qooda fudhattootaaf, arjoomtotaa fi ummata naanoo piroojektii jiraniif itti gaafatama fudhachuu irratti hundaa’a.
Seenaa darbe keessatti yeroo jalqabaatiif yeroon beela balleessan dhihoo ta’eera. Akkuma warra baayyee gamtaa misoomaa keessatti hirmaataniitti fuulduratti yeroon hojii keenya barbaachisaa hin taane akka dhufu ni abdanna. Mullata keenya kana akka galmaan geenyutti nu gargaaraa; addunyaan beela irraa bilisa taate akka uumamtutti qabsoo kana keessatti hirmaadhaa.